Baahin shaqo dowlada hoose Garowe Hanti-dhowraha gudaha (Internal Auditor) – DMS
HomeWararkaBaahin shaqo dowlada hoose Garowe Hanti-dhowraha gudaha (Internal Auditor)
Baahin shaqo dowlada hoose Garowe Hanti-dhowraha gudaha (Internal Auditor)
21st October 2019 admin1
Ujeedka Shaqada Sargaalkaan wuxuu noqonayaa Hanti-dhowraha gudaha (Internal Auditor) ee dowladda hoose ee Garowe.
JAANGOYNTA IYO QEEXIDA SHAQO.
Hanti-dhawraha Gudaha waa Hanti-dhawrka gudaha ee dowladda hoose ee Garoowe wuxuuna leeyahey masuuliyadda iyo awood uu ku guto kuna qabto baaris xisaabeed, baaris wax qabad iyo baaris in nidaamka iyo habraacyada la raacay (financial, compliance, and performance audits)
Hantidhowraha gudaha ee dowladda hoose wuxuu baarayaa habsami u shaqaynta iyo awoodda dabargudeedyada (Internal Control system).
Hanti dhowraha gudaha waxa uu hubinayaa, qabanayaa, kana hortagayaa khaladaadka iyo xatooyooyinka (Errors and Frauds)Marka uu gudanayo baaristiisa/teeda, Hanti-dhawraha gudaha wuxuu hubinayaa: –
In diiwaanada xisaabta si daacad ah oo nidaamsan loo isticmaalay
In shuruucda, nidaamyada iyo dabar gudeedyadu (nidaamka hubinta guduhu) ay ku filan yihiin in ay horseedaan ilaalin wax ku ool ah oo qiimeeyn leh.
Dhammaan lacagaha la kharashgareeyey ee lagu dalacay xisaabta qoondada in loo isticmaaley ujeedadeedii ama ujeedooyinkii uu Golaha Deegaanku ku ansixiyay iyada oo fiiro loo lahaa hubinta dabar gudeed (nidaam hubin gudeed) oo wax ku ool ah.
Dabar gudeedyada (nidaamka hubinta gudaha), xeer nidaamiyayaasha, nidaamyada la sameeyey ee la raacay in ay ku filan yihiin in si ku filan loo badbaadsho ilaalinta bakhaarada iyo hantida kale ee dawladda hoose leedahay.
Marka uu fulinayo baarista wax qabad ama baarista in lacagta loo isticmaalay sida ugu saxsaxsan, (value for-money audits) Hanti-dhawrahaa Gudaha waxa, uu eegi doonaa illaa iyo xadka dowladda hoose ay lexe-jeclo khayraadkeedii u adeegsatay isla markaana ay ku wado hawlaheedai si dhaqaale leh, hufan oo wax ku ool ah (economically, efficiently, and affectively).
Waxuu talo ku soo jeedinayaa siyaabaha loo hormarinkaro hababka, dabar-gudeedyada iyo habraacyada dowladda hoose
Wuxuu dabagal iyo baaritaan madax banaan ku samaynayaa dhamaan mashaariicda ka socda Degmada.
Si joogta ah ayuu dib u fiirin ugu samaynayaa dakhliga iyo kharashaadka dowladda hoose Waxyaabaha laga rabo
Soo gudbinta Araajida Qofka buuxiyey sharuudahan shaqo wuxuu kusoo diri karaa CV-giisa oo wata ugu yaraan saddex qof oo tixraac ah (references), codsigiisa iyo araajidiisaa shaqo cinwaanka hr.garowemunicipality@gmail.com ama arjiga oo daabacan ayuu wuxuu keenikarayaa xafiiska xoghaynta guddoomiyaha Dowladda Hoose ee Garoowe ugu danabayn 31/10/2019(12:00 PM- duhurnimo) .
Lifaaqa hoose kala deg faahfaahinta oo dhamaystiran.
Baahin shaqo banaan D/hoose Garowe Agaasimaha Waaxda Arimaha Bulshada
Shaqo banaan dowlada hoose Garowe Agaasimaha qorshaynta,kormeerka & dabagalka